जुझारु उम्मेद्वार श्रेष्ठको नेतृत्व यसकारणले जरुरी छ | NewsMissile.com
जुझारु उम्मेद्वार श्रेष्ठको नेतृत्व यसकारणले जरुरी छ
Newsmissile November 07, 2017 राजनीति, विचार, समाचार0Comment
नेपालको संविधान २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा मुलुक अगाडी बढी रहेको छ । संघीय प्रणालीको संविधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश र केन्द्रिय संसदको आम निर्वाचको तयारीमा देश लागि रहँदा यतिवेला कुन प्रदेशमा कस्ता उम्मेद्वार र संघिय संसदको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कस्ता उम्मेद्वार बनेका छन् । आम मतदातामा कौतुहलता र जिज्ञाशा देखिएको छ।
यसै सन्दर्भमा काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र नं ७ प्रदेश (ख) वाम गठबन्धनका साझा जुझारु युवा उम्मेद्वार प्रकाश श्रेष्ठ संग न्यूज मिसाइलका सम्पादक सानुराजा पुरीसंगको कुराकानीमा आधारितः-
तपाई काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र नं ७ प्रदेश (ख) वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार वामपन्थीको सहयोग पाउनु हुन्छ ?
हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र नं ७ प्रदेश (ख) मा नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नं.३, ४, ५ का पर्दछ। यहाँ रहनु भएका आम मतदाताले अनि हाम्रो वाम सहयोद्धा कमरेडहरुले सहयोग गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु। विशेषत नेकपा माओवादी केन्द्रसंगको हाम्रो सहकार्य निर्वाचनमा हुनेछ भने निर्वाचनपछि हामी एउटै पार्टी हुदैछौ। यो निर्वाचन मात्र प्राविधिक कारणले हामी लागेका होइनौ हाम्रो गन्तव्य यात्रा लामो छ तसर्थ हामीलाई पूर्ण सहयोग साथ वामगठबन्धनको हुनेछ।
तपाईको उम्मेदवारी किन आवश्यक छ ?
संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक विकास, स्वरोजगार अभियान भौतिक पूर्वाधारहरुको विकासका लागि वाम गठबन्धनको आवश्यकता यतिवेला महसुस भएको छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा प्रदेश सभाको ठूलो भूमिका हुने भएकोले मेरो उम्मेद्वारी त्यसैका लागि हो ।
तपाईको दलको एजेण्डा छदैछ, प्रदेश ७ ख को विकास को एजेण्डा के छ ?
पहिलो प्राथमिकता सडक, खानेपानी, यातायात, शिक्षा लगायतको विषयलाई केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार वीचमा कसरी समन्वय गरी संचालन गर्न सकिन्छ भनि मसिनो रुपमा हेर्दछु । म हिजो पनि जनताको माझमा रहेर काम गरि सकेकोले भोलिका दिनमा कसरी कुन ठाउँमा विकास के गर्नु पर्दछ भने योजना म संग छ । परम्परागत बस्तीहरुलाई प्रविधिसंग आवद्ध गरि सहर विकास गर्ने, खोलाहरुलाई प्रदुषण मुक्त बनाउने, सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण रोकि व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने योजना कार्यक्रम हामीसंग छ ।
आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा नारा मात्र हो भनि जनताले आलोचना गरेकोमा के भन्नुहुन्छ ?
आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा नारा मात्र होइन, अब आम निर्वाचनपछि वाम गठबन्धन सरकार बनेपछि स्थिर सरकार हुनेछ र त्यो सरकारले विभिन्न कार्य गर्नेछ। विगतमा कम्युनिष्ट सरकार बनेको देख्न नसक्ने देशीविदेशी शक्ति केन्द्रले हाम्रो योजना लागू गर्न दिएन हामीले योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न पाएनौ र हाम्रा योजना अलपत्र परे। वाम गठबन्धनको प्रदेश र केन्द्रमा सरकार बनिसकेपछि हामीले कृषि पर्यटन र जलविद्युतलाई एकसाथ प्राथमिकतामा राखि कार्य गर्नेछौ अनि यसबाट हुने लाभको फल जनताले पाएपछि त्यो दिन वाम सरकार किन आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
तपाईहरुको योजना महत्वकांक्षी मात्र हो भनिन्छ नि ? के त्यस्तै हो ?
होइन हाम्रा योजना यथार्थपरक धरातलमा बनेका छन्। देशका पूर्वाधारको विकास गर्छु, विभिन्न स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउने, रेल चलाउने विभिन्न ठाउँमा केवुलकार चलाउने विषय उठाउनु कसरी महत्वकांक्षी योजना हो र ? विश्वका धेरै देशले गरेका कार्य नेपालमा गर्छु देशलाई समुन्नत बनाउँछु भनेको न हो। हाम्रो सरकारले यी काम गर्छ र गर्न सकिने विषय नै हुन्।
तपाईको निर्वाचन क्षेत्र मिश्रित शहरी क्षेत्र हो यसको विकासमा के गर्नुहुन्छ ?
कृषि क्षेत्र ठुलो मात्रमा छ। यसको अधिकतम् सदुपयोग गर्ने योजना छ। आधुनिक र व्यवसायिक कृषि प्राणी लागू गरिनेछ। सहकारीहरुलाई सक्रिय गरि कृषि पेशलाई मर्या्िदत र आम्दानीमूलक पेशाको रुपमा परिचित गराउन कृषि बजार स्थापना गर्ने। बजार अनुगमन गर्ने। युवाहरुको लागि गोलढुंगामा निर्माण भैरहेको फुटवल खेल मैदानलाई राष्ट्रियस्तरको बनाउने। ताकेश्वार नगारपालिकाको वडा नं ३ र ४ लाई जैविक कृषि पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना हामीसंग छ । शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको ठूलो भाग हाम्रो प्रदेशमा पर्दछ । यसको सदुपयोग गरि पर्यटनको विकास गर्ने, ग्रामीण कृषि चक्रपथ निर्माणको थालनी गर्ने योजना हामीसंग छ ।
व्यवस्थित सहरीकरण कसरी होला ?
व्यवस्थित सहरीकरणको लागि हामीले अवधारणा प्रस्तुत गरि सकेका छौ । त्यो अवधारणा भनेको अव बन्ने घर मापदण्ड बमोजिमको बनाउने जसले गर्दा व्यवस्थित बस्तीहरुको विकास हुन्छ । हरीयाली सहरको अवधारणा आमीसंग छ । प्रकृति वातावरण मैत्री उघोग स्थापनामा हामीले विशेष जोड दिने छौ। जसले गर्दा प्रदुषण न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । इचंगुनारायण क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचिमा राख्न पहल हुनेछ। परम्परागत संस्कृतिको संरक्षणमा विशेष कार्ययोजना ल्याइनेछ।
शिक्षा, स्वास्थ्थ सर्वसुलभ, ग्रामीण अस्पताल, सहरी क्लिनिक, प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना, प्रविधि मैत्री शहरको विकासमा हामी निरन्तर लागि रहने छौ। हामीलाई जिताउनुहोस् जनअपेक्षा पूरा गर्ने बाचा गर्दछु ।
Previous प्रचण्डलाई नै रुवाउने कलाकार दिपाले पाइन टिकट
Nextराजधानीमा आम निर्वाचनको रौनक